5 Goobta ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'picnic Spot Europe' | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Goobta ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'picnic Spot Europe'
Haddii aad u safraysid usbuuc dhammaad ama fasax gaaban oo Yurub ah, waa inaad had iyo jeer sameysaa waqti aad ku nasato. Riwaayaddu waa hab la yaab leh oo lagu nasto oo lagu bogaadiyo qaar ka mid ah goobaha muuqaalka iyo aragtida leh. Sidaas, si lagaaga caawiyo bilowga fasaxa yurub, waxaan gacanta ku soo qaadanay oo baakado ku duudduubay booska ugu fiican Yurub. Kaliya fadhiiso, kuna raaxayso aragtida!
1. Petrin Hill, Prague
Muuqaallada iyo jawiga ku dhex yaal beerta 'Petrin Hill park' ayaa mid ka mid ah sameysa 5 kaalinta ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'piska' ee Yurub. Fadeexad, oo ku yaal magaalada Kayar, Petrin Hill waa garoon cagaaran oo qurxoon oo iska indha tiraya Prague Castle. Petrin waxay bixisaa aragtida ugu quruxda badan ee caasimada, oo waad u fuula laheyd ilaa munaaradda indha indheeynta loogu talagalay run ahaantii aragtiyo muuqaal leh ee magaalada, Daar wayn, iyo buundooyinka.
Petrin Hill waxay ku habboon tahay sawirada Yurub dhexdeeda guga, dayrta ama xagaaga. Caleendu waxay u muuqan doontaa gebi ahaanba yaab leh dayrta guga iyo xagaaga dhammaan dhirtu iyo dhulku way ubxin doonaan oo midab cagaar leh. Kaliya iskaga qaad qoorta qaar ka mid ah miraha ka soo baxa Bakhaarka Fanka oo dhammaantiin waxaad ku gogol xaadhay riwaayad aad u wanaagsan oo ku dhex taal Prague.
Sida loo tago Petrin Hill?
Petrin Hill waxay ku dhowdahay Old Town iyo badhtamaha magaalada. Waxaad ku safri kartaa maadada ficil ahaan, taraam ama bas, sida dalxiisayaasha oo dhan. laakiin, waxaad lug ku tagi kartaa Petrin Hill, u gudub Charles Bridge dhanka Mala Strana iyo derbiga Lennon. Waxay ku qaadan doontaa saacad haddii cimiladu wanaagsan tahay oo duugista qorraxdu ay u noqon doonto dhamaadka ugu riyaaqsan maalintan riyada ah ee magaalada.
2. Saanad Saxon Switzerland ku taal, Germany
Wabiyaasha waaweyn, baraf dhalanaya hortii, iyo cawska cagaaran ee hareerahaaga ah, Saxon Switzerland Beerta qaranku waa janno aad u qurux badan. Subax subax ah ama dhamaadka dhamaadka socod dheer, buundada Bastei waa goobta ugufiican ee loo yaqaan 'pnic' cajiib leh.
Haddii aad galaysid waxyaabo xiisaha leh iyo hiwaayad aad u xiiso badan, xaqiiqdii waad ku mahadsan doontaa qaadashada biririf. Dhanka kale, haddii aad doorbideyso nolol quruxsan iyo nasasho, jardiinada webiga ee Saxon Switzerland ayaa kor usii kici doonta fasaxaaga Yurub oo dhan.
Sida loo tago Saxon Switzerland?
Saxon Switzerland ayaa keli ah 30 Safarka tareenka daqiiqadaha wuxuu ka socdaa Dresden. Sidaas, xirmo Eierschecke, kafeega, berry, iyo miraha ka soo baxa suuqa maxalliga ah oo aad dhammaantiin ku jiheysan tihiin waqti aad u wanaagsan mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan riwaayadaha Yurub.
3. Jacaylku wuxuu maraa balliga Lago Di Braies, Italy
Biyo buluug ah iyo dushooda buurood oo ka muuqanaya harada dhexdeeda, aragtida Lake di Braies ee South Tyrol ee Talyaniga waxay midabkaaga ku xusuusin doontaa xusuus wacan. Talyaanigu waa cirka, marka lagu daro harooyinka xiisaha leh iyo buuraha, runtii waa lama huraan in la sharraxo sababaha badan ee harada noogu sareysa 5 kaalinta ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'piska' ee Yurub.
Haddii aad daneynaysid inaad ku dhex safarto Dolomites, socodka lago di Braie maalin-socodku waa fududahay. Sidaas, waxaad ku dhammaysataa maalin cajiib ah dabeecadda, inaad qaniinto ka hesho Panini ama pizza aadna aad u jeclaatid aragtida harada dabiiciga ee ugu weyn Dolomites-ka.
Sideen Ugu Socdaa Lago Di Braie?
Lago di Braies waa safar tareen oo ka fog Bolzano, magaalada ugu dhow. Waxay qaadaneysaa saacad tareen, ama waxaad ka heli kartaa degitaan cajiib ah dhow.
Milan ilaa Venice by Train
Padua ilaa Venice tareenka
Rome ilaa Venice by Train
4. Jasiirad ku taal Jasiiradda Margret Island, Budapest
Waxay ku taalaa wabiga Danube, inta udhaxeysa Buda iyo Cayayaanka, Jasiiradda Margaret waxay kufiican tahey guga guga ee Budapest. Jasiiradda ayaa 2.5 km, ka mid ah dadka maxalliga ah oo madadaalo dibadda ah qoraxdu u hesho. Intaa waxaa dheer, waxaa jira suuq maxalli ah oo u dhow, sidaa daraadeed looma baahna in magaalada laga soo qaado daawaynta sawirkaaga by gaadiidka dadweynaha. Kaliya waad la qabsataa dhammaan waxyaabaha aad ugu jeceshahay iyo xoogaa macaan oo maxalli ah suuqa isla markaana aad jasiiradda.
Waxaa sidoo kale jardiinada Jaban ku leh jasiiradda Margaret oo gebi ahaanba u qalantaa booqasho kahor ama kadib sawirkaaga cajiibka ah.
Sideen Ugu Socdaa Jasiiradda Margaret?
Tareenka ama baska, Jasiiradda Margaret waxaa si aad ah looga isticmaali karaa gaadiidka dadweynaha. Caarada Insider: Kaarka Budapest wuxuu kuu helayaa siyaado gaar ah oo loogu talagalay gaadiidka dadweynaha iyo soo jiidashada.
5. Riwaayado In Champs De Mars Paris
Magaalada Paris waxay leedahay jardiinooyin qurux badan oo aan la tirin karin iyo goobo qurux badan oo ku teedsan Seine-ka. Meesha ugu wanaagsan ee lagu sawiray ee ku taal Paris waxay ku taal meel sare oo astaan ​​u ah Champs de Mars.
Waa dhul cagaaran oo weyn oo u dhexeeya arrondissement toddobaad iyo Eiffel Tower. Waxay ku habboon tahay sawirada buluuga ah ee Paris waxayna bixisaa kuraasta ugu fiican ee qorrax dhaca. Marka lagu daro muuqaalka muuqaalka, sidoo kale waa mid ka mid ah 10 aragtida ugu wanaagsan ee ku taal Eiffel Tower ee Paris.
Qoysas walba oo ku yaal Paris waxay u yimaadaan inay qoraxda qoraxda ama ay ku raaxeystaan ​​muuqaalka dayrta ee jardiinooyinka. Waa deganaansho aad u deggan oo waxay bixisaa goob cajiib ah oo lagu daawado nalalka habeenkii ee Eiffel Tower.
Sidaas, Hubso inaad xirmayso baguette cusub, yimidmbert, miro cusub, khamri, una gudub mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan Yurub.
Sida loo Helo Champs De Mars Gardens?
Waad qaadan kartaa metrooga ama tareenka RER. Si fudud uga kac saldhigga 'de de de-de-Eiffel Station.
Safarku wuxuu noqon karaa mid xad dhaaf ah oo daal badan maxaa yeelay waxaan had iyo jeer dooneynaa inaan aragno oo aan la kulanno wax walba. Yurub waxay leedahay howlo aad u tiro badan oo aan la ilaawi karin iyo aragtiyo la soo bandhigi karo. In kasta oo ay tahay inaad had iyo jeer ku dadaasho inaad aragto intii suurtogal ah, mararka qaarkood waxaad u baahan tahay oo keliya inaad si fudud u qaadatid. Lahaanshaha sawirka leh cuntooyinka macaan ee maxalliga ah waa hab cajiib ah oo lagu baaro dalka iyo cuntada, adigoon talaabo qaadin.
Amsterdam ilaa Paris by Train
London ilaa Paris by Train
Rotterdam ilaa Paris by Train
Brussels ilaa Paris by Train
halkan at Save A tareenka, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino helitaanka tigidhada tareenka ugu raqiisan meel kasta oo qurxoon oo booska ah ee liistadeena ah.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "5 Ugu Fiican Suuqyada Yurub" ee boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/best-picnic-spots-europe/ የሰማይ አካላት– (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
picnic picniceurope PicnicinParis picnicspotseurope picnictable summertravel SafarkaPrague travelswitzerland
top 3 Tareennada Yurub adeegaya Cuntada Good
Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe